Idola yokundwendwela i-90.00 + i-Cryptos kwiNtengiso ye-Bear? - Forex Lens
I-dollar ijonge ukuphinda inqanaba eliphambili le-90.00 yengqondo njengoko iibhere zithatha ulawulo kwakhona. Xa kuthelekiswa, imarike ye-crypto ikwatshintshela kwisigaba sebhere njengoko iBitcoin yehla ngezantsi kwe-45,000 okokuqala kwiinyanga.
Emva komhlangano weveki ephelileyo, i-US Dollar Index ijonge ukubuyela ezantsi ukuya kwiveki ephelileyo. Eli zantsi lenziwa kwinqanaba leengqondo le-90.00 elaliyinkxaso kwiinyanga ezidlulileyo. Ukuba iibhere zinokuqhekeka kwaye zivale i-bearish ezantsi kweli nqanaba, ixabiso linokwenza indlela eya kwi-88.75.
Ngaphandle kwento ebonakala ngathi inqanaba lenkunzi ngolwesiHlanu, uninzi lwee-cryptos zijikeleza kumgangatho omtsha wekota. I-Bitcoin ingaphantsi kwama-45,000 okokuqala ukusukela ngoFebruwari kwaye iibhere zinokutyhala amaxabiso asezantsi xa zinokuvala ngaphantsi kwama-40,000. I-Ethereum ibuye yangaphantsi kwe-3,500 emva kokudala ixesha elipheleleyo kwiveki ephelileyo.
Xa iDollar isetelwe ukwenza umda omtsha kunye nemarike ye-crypto enokuthi ishenxise i-bearish, abathengisi banokuthi bajonge iibhulukhwe ezimfutshane. Kwi-flipside, abarhwebi banokujonga kwizinto ezithile ezinjengegolide kunye neCrude.
Bhalisela i Ubulungu basimahla.
Ngena kwi Bukela iiwebhu zewebhu ezirekhodiweyo kwigumbi lethu lokurhweba nge-Forex.
Thetha nabarhwebi bethu kwi UMncedisi ekuHlaleleni abaNtu.
Funda ngokwahlulwa izolo: Iidola zeDollar zibuyile, iBitcoin kunye ne-Ethereum yeLanga engena
Ngamana 17, 2021 /by Forex Lens iindaba
tags: I-bitcoin ebambekayo, Uhlalutyo lwe-crypto, crypto yorhwebo, DXY, Uhlalutyo lwe-ethereum, Uhlalutyo lwedatha, phambili imfundo, Forex bukhoma ukurhweba, inzuzo ye-forex, imiqondiso Forex, igumbi lokurhweba le-forex, uhlalutyo oluphambili, kuphila ngokurhweba kwe-forex, ixabiso intshukumo yorhwebo, uhlalutyo yobugcisa, KwiDola yaseMelika, Uhlalutyo lwedola
I-USDCHF kunye ne-AUDUSD Kwinzuzo + ye-USDJPY kwi-Drawdown
I-GBPUSD ibetha ukujolisa
Idatha eDityanisiweyo yokuthengisa yase-US + Uphi na i-DXY?
Iveki yokuRekhoda urhwebo + Izimvo zoRhwebo ngeVeki ezayo
Iimpawu zoRhwebo ze-EURUSD kunye ne-GBPUSD + DXY ukuya kwi-94?
Lumkela iiSmoscreens + I-AUDJPY Ukuseta okufutshane
Iidola zeDollar zibuyile, iBitcoin kunye ne-Ethereum yeLanga engena I-USDCHF kunye ne-USDCAD iibhulukhwe ezimfutshane ezilunge njengeDriphu